Nepali Rajneeti | “बेलैमा सबै, सजग हौँ! संविधान ज,लाउनेबाट, देश टु,क्राउछु भन्ने अभिव्यक्ति आउनु ,अचम्मको कुरा होइन!:- रबिन्द्र मिश्र,”
जेठ २३, २०७८ आइतबार ६१ पटक हेरिएको
रबिन्द्र मिश्र लेख्नु हुन्छ। संविधान ज,लाउनेलाई संविधान र देशको रक्षक बनाएपछि उनीबाट ‘बहूल राष्ट्रिय राज्यका लागि मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने’ अभिव्यक्ति आउनु अचम्मको कुरा होइन!
“कमसेकम सरकारको उप-नेतृत्व गर्दा त संविधानको पालना गरौँ! संविधानले नेपाललाई “बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक” भनेको छ। ‘बहूल राष्ट्रिय राज्य’ भनेको छैन, जुन अत्यन्तै संवेदनशील र विवादित विषय हो।
“यही ताल हो भने देश आन्तरिक र वाह्य ख,तराको बाटोमा उन्मुख देखिन्छ। ढिलो गरि आएको चे,तना शिक्षा होइन, पश्चतापमा सीमित हुन्छ। बेलैमा सबै सजग हौँ।
“यो पनि हेर्नुस् :-“उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा, पनि पैसाको ठूलो, चलखेल भएको छ : महेन्द्र यादव”
“काठमाडौं, २२ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मन्त्रिपरिषद पूनर्गठन गर्दा तीन जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा त्यसमा पैसाको ठूलो चलखेल भएको टिप्पणी गरेका छन् । राजेन्द्र महतो र रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाईएकोबारे उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।”
“आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने-“केपी ओली सरकारको मुश्किलले दश, पन्ध्र दिन होला ।”
“केपी ओलीले यस्ता जनाधारविहीन मान्छेहरुलाई, यो हैसियत नै नभएका मान्छेहरुलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर, यसमा पनि मलाई लाग्छ उपप्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा पनि पैसाको चलखेल भएको छ । ठूलो चलखेल भएको छ ।”
“उनले प्रधानमन्त्री ओलीले यो देशलाई कतातिर लगिरहेको ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भ्रष्टाचारीहरुलाई मन्त्री बनाईएको पनि आरोप लगाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओली सबै मामिलामा असफल भैसकेको जिकिर गरे ।” मेची महाकालीवाट